အမျိုးသားဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များ၏လိင်မှုဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်သူများပျံ့နှံ့မှုနှုန်း (၂၀၁၃) - သင်၏ ဦး နှောက်သည်ဆန့်ကျင်နေသည်
Michele အယ်လ် Ybarra, MPH1; Kimberly ဂျေမစ်ချယ်၊ ပါရဂူဘွဲ့2
ဂျေအေအမ်အေကလေး။ အွန်လိုင်းအောက်တိုဘာလ 07, 2013 ထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1001 / jamapediatrics.2013.2629
အရေးကြီးပုံ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုသေးအနည်းငယ်သာလူငယ်ကျူးလွန်သူ-အထူးသဖြင့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားမျှတမှုစနစ်ဖြင့်ပါဝင်ပတ်သက်မဟုတ်သူတို့၏အကြောင်းကိုလူသိများသည်, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်ပေါ်ထွက်လာနိုင်ပါတယ်။
ဒီဇိုင်းပြင်ဆင်မှုအားနှင့်ပါဝင် ဒေတာကိုအမျိုးသားမီဒီယာလေ့လာမှုနှင့်အတူကြီးပြင်းလာ၏အတွင်း 2010 (လှိုင်း 4) နှင့် 2011 (လှိုင်း 5) တွင်အွန်လိုင်းစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ သင်တန်းသားများကိုနှစ်ပေါင်း 1058 မှ 14 လူငယ်များသည်အသက် 21 ပါဝင်သည် အခြေခံမှာအင်္ဂလိပ်စာဖတျသူမြား, အိမ်သူအိမ်သားအတွက်အချိန်အနည်းဆုံး 50% အသက်ရှင်နှင့်နောက်ဆုံး6လအတွင်းကအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ်ထမ်းခေါ်ယူမှုလူငယ်များသည် '' ဇီဝလိင်နှင့်အသက်အရွယ်အပေါ်ဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းခဲ့သည်။
အဓိကရလဒျနှင့်ဆောင်ရွက်ချက်များ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်, coercive လိင်အတင်းအကျပ်, မုဒိမ်းမှုကြိုးစားခဲ့နှင့်မုဒိမ်းမှုပြီးစီးခဲ့သည်။
နီးပါး 1 လူငယ်အချို့ (10%) အတွက်9၎င်းတို့၏တသက်တာမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကိုကျူးလွန်အချို့ကိုအမျိုးအစားအစီရင်ခံ; 4% (10 အမျိုးသမီးနှင့် 39 အထီး) ကြိုးစားခဲ့သို့မဟုတ်ပြီးစီးခဲ့အဓမ္မပြုကျင့်မှုကဖော်ပြခဲ့သည်။ တဆယ်ခြောက်နှစ်အဟောင်းပထမဦးဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန် (ဎ = 18 [40%]) ၏ mode ကိုအသက်အရွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအကြမ်းဖက် X-rated အကြောင်းအရာ သာ. ကြီးမြတ်ထိတွေ့မှုကဖော်ပြခဲ့သည်။ 98 နှစ်သို့မဟုတ်အငယ်ဖြစ်ပထမဦးဆုံးကျူးလွန်မှာအသက်အရွယ်သတင်းပေးပို့သူကိုအားလုံးနီးပါးကျူးလွန်သူ (15%) အလားတူအတူအထီးခဲ့ကြသည်ပေမယ့်အသက်အရွယ် 16 သို့မဟုတ် 17 နှစ်ပေါင်း (90%) မှာစတင်ခဲ့သူတို့တွင်ရလဒ်များကို attenuated ။
ဒါဟာယောက်ျား (18%) နှင့်အမျိုးသမီး (19%) အတော်လေးအညီအမျှကျူးလွန်သူအဖြစ်ကိုယ်စားပြုဖြစ်ကြောင်းအသက်အရွယ် 52 သို့မဟုတ် 48 နှစ်ပေါင်းသည်အထိမဟုတ်ပါဘူး။ ပထမဦးဆုံးကျူးလွန်မှာအသက်အရွယ်မှဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဆက်စပ်, အမျိုးသမီးအဟောင်းများကိုသားကောင်များဆန့်ကျင်ကျူးလွန်ဖို့ပိုဖွယ်ရှိ ရှိ. , အထီးအငယ်သားကောင်များဆန့်ကျင်ကျူးလွန်ဖို့ပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်။ အစောပိုင်းက perpetrating စတင်ခဲ့သူကိုလူငယ်များစောင့်ရှောက်သူများနှင့်အတူဒုက္ခရဖို့ဟောင်းများကိုလူငယ်များသည်ထက်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည် ဖြစ်. , အဟောင်းတွေကိုစတင်လူငယ်များသည်အဘယ်သူမျှမကျူးလွန်အကြောင်းကိုအထဲကတွေ့ညွှန်ပြပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိကြ၏။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကိုကျူးလွန်ဖြစ်ကောင်းကွဲပြားခြားနားသောဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘယ်နေရာတွေမှာအကြံပြုခြင်း, အမျိုးသမီးထက်အထီးအဘို့အစောပိုငျးကပေါ်ထွက်လာပုံပေါ်ပါတယ်။ ကျူးလွန်ခြင်းနှင့်အကြမ်းဖက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြား links ကဒီပစ္စည်းမြီးကောင်ပေါက် '' စားသုံးမှုကိုစောင့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းအကြံပြု, သိသာဖြစ်ကြသည်။ အကျိုးဆက်များကြုံတွေ့ရမသော်လည်းအပြစ်တင်ခံရသူ, ဘုံဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ကြည့်ရှုနေသူဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအဖြစ်ကျူးလွန်သူဖော်ထုတ်ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်ခြေကိုမြှင့်တင်ရန်နိုင်ကြောင်းမူဝါဒများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုကိုအားပေးကြောင်းကျောင်းကိုအစီအစဉ်များအတွက်အရေးပေါ်လိုအပ်နေထို့ကြောင့်ရှိပါသည်။